Isikwere somthi weSipho seSushi seBhokisi yeNyanga yeNyanga
Ibhokisi yekhekhe leSushi lePlanga leSushi lePlanga liyilo elitsha ngo-2021. Ingasetyenziselwa ikhekhe lenyanga, iSushi, ikhekhe okanye ezinye iimveliso zesipho.Izinto zayo zibandakanya ezantsi ngomthi, isiciko sephepha kunye nefestile yePET ebonakalayo. Singayitshintsha nefestile yePET ibe yi-PLA window., Eziza kuyenza ibenokuboliswa ziintsholongwane ngoku ngoku lonke ilizwe liza kunciphisa ukusetyenziswa kwemathiriyeli yeplastiki, ke ukukhetha olu hlobo lokupakisha kuya kwanelisa isicelo sabathengi. Kwaye sinokuprinta kwibhokisi yephepha elingaphandle kunye nelogo yakho okanye naluphi na uyilo olifunayo. Ukuba uyayithanda, nceda unxibelelane nathi ngokukhululekileyo.
Lixabiso zeplastiki PET Amanzi juice Bottle
Le bhotile yokubumba sinama-250ml kunye nama-500ml. Sinokubonelela ngePlastiki yexabiso eliphantsi kakhulu yePlastiki yePlastiki yeJuice, kuba sinokusebenzisa ezona zinto ziphantsi ukuvelisa eyona bhotile yexabiso eliphantsi ngolu hlobo. Ke, ukuba ufuna ukuthenga ibhotile enexabiso eliphantsi, le iya kuba yeyakho efanelekileyo.Sithengise le bhotile e-USA, Australia, EU nakwamanye amazwe.Sikhathalele ngexabiso elifanelekileyo elinomgangatho ofanelekileyo ukunceda abathengi ukuba bagcine iindleko kwaye bafumane umda olungileyo.
Iqela leSushi Box-Chunkai
Ibhokisi yeSushi ye-CHUNKAI inenzuzo enkulu njengezantsi:
1.Good Sealling yokugcina ekhuselekileyo
2.Different Ubungakanani ukhetho lwakho
3.Thicker kunye nezinto ezinzima
Uyilo lwe-4.Exquisite enepateni entle
5.Antifogging, ngcono ukubonisa
I-Pizza Box Supplier Factory-Iqela laseChunkai
Ibhokisi yePizza eprintiweyo ilungile, ipateni inomdla, kwaye akukho lula ukuyipenda. Indawo e-ethe-ethe kunye egudileyo, ungenziwa ulungelelwaniso, kwaye uyilo lomngxunya wokufaka umoya luqinisekisa ukuba ipitsa ayonakalisi. Ibhokisi iqinile kakhulu, izinto zokutya ezikudidi lokutya, ezinempilo kunye nezendalo, ezinokuhlangabezana nomgangatho we-FDA, okhuselekileyo nongcoliseko-free. Isakhiwo sokwakha senza kube lula ukuvula nokuvala ngexesha lokuyisebenzisa.
I-Container yokutya okutya okubolayo-Iqela laseChunkai
Isikhongozelo sokutya esinokuboliswa ziintsholongwane-seQela laseChunkai
Isilivere yeAluminiyam yeFoyile yokubhaka
Ifoyile ye-Aluminium yenziwe nge-alloy aluminium yoqobo emva kwenkqubo yokuqengqeleka, ngokwayo ngaphandle kwesinyithi esinzima kunye nezinye izinto eziyingozi.Inkqubo yokuvelisa ifoyile yealuminium, inkqubo yokubulala iintsholongwane ebushushu obuphezulu iyamkelwa, ukuze ifoyile yealuminium ikwazi ukunxibelelana ngokukhuselekileyo nokutya , ayizukubamba okanye incede ukukhula kweentsholongwane.Iimeko ezininzi, ifoyile yealuminium ayizukuphendula ngokutya.
Ibhokisi yeGolide yeAluminiyam yokuThatha iBhokisi
Xa upakisha ukutya kwakho ngefoyile yealuminiyam uthintela inani elikhulu leebacteria ezinokuphela zijikeleza ekhaya xa kuphekiwe. Nangona kukho iziphene ezimbalwa ekusebenziseni i-foil xa kuthelekiswa nezinye iimveliso zokupakisha, izibonelelo eziyinyani zilinganisile. Ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokuba uyafuna na ukusebenzisa i-foil okanye iplastiki, qiniseka ukuba ujonga izinto ezilungileyo nezingalunganga kwimveliso nganye ngaphambi kokuba uthenge.
Isikhongozeli seHamburger yeBhokisi enokuBoliswa ziintsholongwane
I-Bioplastics zizinto zeplastiki eziveliswa kwimithombo ye-biomass evuselelekayo, enje ngamafutha emifuno kunye neoyile, isitatshi sengqolowa, umququ, iinyanda zemithi, isarfusi, inkunkuma yokutya erisayikilisisiweyo, njl njl. kunye nezinye izikhongozeli) ngokusebenzisa iintsholongwane. I-Bioplastics ihlala ithathwa kwiziphumo zeswekile, kubandakanya isitatshi, iselulosi kunye ne-lactic acid. Iiplastikhi eziqhelekileyo, ezinjengeefossil-fuel plastics (ekwabizwa ngokuba ziipetroli zepetroli) zithathwe kwipetroleum okanye kwirhasi yendalo.